Musuq maasuq Jira aawgeeda Tarsan oo dhahay “Waxaa la ii diiday inaan u tartamo Kursiga Xildhibaanimo”!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Musuq maasuq Jira aawgeeda Tarsan oo dhahay “Waxaa la ii diiday inaan u tartamo Kursiga Xildhibaanimo”!!
Musuq maasuq Jira aawgeeda Tarsan oo dhahay “Waxaa la ii diiday inaan u tartamo Kursiga Xildhibaanimo”!!
Nov 19, 2016WARAR
Duqii hore ee Muqdisho ahna Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo Kursiga Xildhibaannimo ee Aqalka Hoose.
Tarsan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in laga hor-istaagay inuu u tartamo kursiga Xildhibaannimo ee beeshiisa.
“Waxaa la ii diiday inaan u tartamo kursiga Xildhibaannimo si fudud ah, kaddib markii Ugaaska Beesheyda uu lacag fiican ka helay Madaxweyne Xasan Sheekh”ayuu yiri Tarsan.
Mr Tarsan oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu afka dheer ayaa ku eedeeyay in Madaxweyne Xasan Sheekh in nidaamka siyaasada kaliya aanu musuq maasuqin, balse odayaasha dhaqanka iyo bulshada uu musuq maasuqay, taasoo uu ku tilmaamay inuu aad uga xun yahay.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ayaa dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay xisbi siyaasadeed, isagoo sheegay inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha, waxaa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta sida aad u dhaleeceynayay siyaasada Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Janaraal Gabre oo u taliya Siyaasiinta Md Xasan Sh.
Doorashooyinka kuraasta Aqalka Hoose ee ka socota deegaanada maamul goboleedyada ayaa lagu soo diiwaan geliyay musuq maasuq iyo awood sheegasho, iyadoo meelaha qaar ay ka dhaceen shaqaaqado dhimasho iyo dhaawac sababay taasna waxey muujineysaa in shacbiga laga dhaxtalaalay masas dhaa dheer oo wax haligay.
Previous PostColaadihii Ka Qarxay Cuntooyinka Caadiga ah ee Aduun waynaha laga diiwaan galiyay Daawo muuqaal!! Next PostDEG DEG: Is rasaaseyn ka dhacday xarunta doorashada Aqalka Hoose ay ka dhaceysay ee Jowhar!